Qaboojinta Hawada ayaan lagu shaqeyn doonin ESHOT iyo IZULAS Basaska Caafimaadka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirQaboojinta Hawada ayaan lagu shaqeyn doonin ESHOT iyo IZULAS Basaska Caafimaadka
15 / 05 / 2020 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Qaboojiyeyaasha looma shaqeyn doono basaska caafimaadka Izmir
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay qaadatay go’aan muhiim ah iyadoo la raacayo talo soo jeedinta Guddiga Sayniska ee Wasaaradda Caafimaadka. Si aan loo xoojin faafitaanka cudurka coronavirus, oo leh heer xawli ku gudbinta tartiib tartiib ah, basaska muddo dheer lama shidmi doono.
In kasta oo ay jiraan tallaabooyinka lagu qaadayo tillaabooyinka lagu xakameynayo coronavirus, Dowladda Hoose ee Magaalada Magaalada Izmir waxay go’aansatay inaysan ku kululeyn qaboojiyeyaasha hawada basaska ESHOT iyo İZULAŞ in muddo ah taas oo ay soo jeedinayaan Guddiga Sayniska Caafimaadka ee Wasaaradda Caafimaadka. Duqa Magaalada Tunis Soyer wuxuu sheegay in dhamaan gawaarida la dayactiro, diyaarna loo yahay in la isticmaalo, laakiin aan la furi doonin qatarta faafa. Isagoo caddeeyay inuu ogyahay dhibaatada ay leedahay safarka isagoo aan lahayn qaboojiye kuleylka, laakiin tallaabadani waa in lagu dabakhaa caafimaadka bulshada, Madaxweyne Soyer wuxuu ugu yeeray dadka Izmir sida soo socota:
Soyer: Faafidda cudurka ma dhammaan
Iyada oo la raacayo go'aannada guddiga Sayniska ee Wasaaradda Caafimaadka, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo maaskaro meelaha bulshada ka tirsan oo fiiro gaar ah loo yeelo fogaanta bulshada. Muwaadiniintayada ka yar da'da 20 iyo wixii ka weyn 65 ayaa wali laga mamnuucay inay ka baxaan jidadka. Kuwani waa tilmaamayaasha ugu weyn ee sheegaya in cudurka dillaacay uusan weli dhammaan. Sidaa darteed, codsigeyga ugu weyn ee muwaadiniinta aan walaalaha nahay waa inaysan iska dhaafin qiyaasta. Hadaanan waajib ku ahayn, yaannaan dibadda u bixin; aan guriga joogno Haddii mas'uuliyaddani sii socoto, waxaan ogahay in maalmo caafimaad iyo qurux leh ay dhow yihiin… ”
Guddiga Sayniska ee Wasaaradda Caafimaadka iyo TMMOB ayaa iyaguna ka digaya
Cudurka coronavirus ee ka dillaacay Turkiga ka dib markii uu qaatay go'aan wanaagsan oo lagu furayo qaar ka mid ah tallaabooyinka la qaaday tan iyo bishii Meey iyo 11 xarumood oo laga dukaameysto, kafateeriyadaha iyo maqaayadaha ayaa laga furay dukaan makhaayad leh iyo meesha timaha lagu qurxiyo. Marka laga hadlayo go'aankan, kaasoo keenaya wadahadalo, labada Guddi ee Wasaaradda Sayniska Caafimaadka iyo Ururka Guryaha Dhismaha Dhismaha iyo Injineerada (TMMOB) waxay ka digayaan khatarta faddaradu inay mar kale korodho, gaar ahaan howl qaboojiyaha hawada ee jawiga xiran.
Iyagoo ogaanaya in fayraska la ogyahay inuu ku faafi karo dhibcaha iyo in nidaamyada hawogu ay sababi karaan dhibcaha ka kooban fayraska in lagu qaado masaafo dheer, khubaradu waxay carrabka ku adkeeyeen in qaboojiyeyaasha hawada in aan loo isticmaalin in muddo ah, gaar ahaan suuqyada dadku ku badan yihiin iyo baabuurta gaadiidka dadweynaha. Waxaa la sheegay inay muhiim tahay in la furo daaqadaha oo la bixiyo hawo cusub oo ka timaadda banaanka haddii ay suurtagal tahay.
ESHOT, IZULAŞ, IZBAN, Metro iyo IZDENİZ Diiwaanka Taariikhda
MOTAŞ waxay xakamaysay xakamaynta hawada basaska dadweynaha
"Kala xiriirida ficilka" ee basaska ESHOT
Bixinta Adigoo Nidaamka Galaya ESHOT Basaska
Muddada Internetka ee Bilaashka ah waxay ka bilaabatay Basaska ESHOT
Baska cusub ee 110 wuxuu yimaadaa IZULAŞ
Laga soo bilaabo TEMA ilaa filimka IZULAŞ 110 Avenue
Safar caafimaad leh oo kuyaala basaska magaalada caasimadda ee Kocaeli
TCDD ayaa lagu dhawaaqay
TCDD 356 ee qorista shaqaalaha
Cunno Xirfadleyda Xirfadlayaasha Caafimaadka ee ka socda Izmir Metropolitan
Ma jirto wadada weyn ee ka jirta Biriijka Birta ee Karakaya Dam Lake
Kusoo gudbin laguma sameyn doono Hamburg
Sidee Gaadiidka Dadweynaha u noqon doonaa Isbuuca Toddobaadka Izmir? İZBAN ma u adeegi doonaa?
Ma waxaad raadineysaa shirkadda ugu fiican ee loo yaqaan 'Logo Company'?
Madaxweyne Küpeli: Kobcintu way Fiican tahay, Soojiidashada Dhoofinta!
Soojiidasho! Kala firdhinta waxaa lagu sameyn doonaa saldhigyada Sivas Kayseri
Waa maxay Steam Locomotive?
Sidee Gaadiidka Toddobaadka ee Istanbul noqon doona? Miyay Metro, Metrobus iyo Steamboats shaqeeyaan?
Bisha Meey 30-31, xilliga bandoowga la adeegsan doono, 498 ama xitaa 22 duulimaad ayaa la abaabuli doonaa. Bandowyada la adeegsan doono dhamaadka usbuuca 858 iyo 30 Meey [More ...]
Goobta saddexaad ee buundada ma furi doonto dib u dhiska
Sarkaalka Gaadiidka Uma Sheegi Karin Shaqada Joojinta Shaqaalaha Tareenka
TCDD: Xarunta Tareenka ee Göztepe lama burburin doono, waa la ilaalin doonaa sida ay tahay
Bayramda Ganacsiga ma xiri doono xuduudda!
Shaqaalaha IZBAN ee tallaabo wadajirka ah ee xiirashada gadhka lama sameyn doono, qurxiyo lama qaban doono